Fitaratra Flat: ny fandraisana anjara vaovao ho an'ny famokarana ny vidiny dia manan-danja
Masinina mpanasa fitaratra fiara
Masinina manasa vilia Flat Glass
Mamatonalina fanasana masinina voaaro ho an'ny Windshield
Masinina manasa vilia fanasana (Brush Version)
Mamatonalina fanasana masinina voaaro ho an'ny Sidelite sy Sunroof
Masinina fanasana mason-dranomasina
Masinina fanasan-trano fanoratana an-trano
Masinina fanasana famoronana fitaratra
2500mm Mamatasa fanasana fitaratra
Masinina misasa fitaratra misy vy (ambany-E)
Milina fanasana fitaratra fitaratra
Mivadika fanasana fitaratra fitaratra mirehitra
Mamatonalina fanasana fitaratra matevina
Namoaka ny tatitra momba ny taona 2018 ny orinasa, miaraka amin'ny fidiram-bolan'ny 3.064 miliara, fampiakarana herintaona amin'ny taona 2,4%, tombony net 407 tapitrisa yuan, mihena 4,5 taona isan-taona, tsy ananana tombony tsy amin'ny net 370 tapitrisa yuan, mihena 9% isan-taona, mifanaraka amin'ny andrasan'ny tsena.
Nidina ny vidin'ny vokatra fihodinam-bidy izay nahomby tamin'ny famokarana vaovao mahomby, ary nijanona ho tsy miova ny fampisehoana isan-taona: Nisedra ny politika 531 fanta-daza, nihena be ny vidin'ny fitaratra fotovoltaika tamin'ny 2018, ny vidin'ny Q3 ambany dia nidina 35% ho an'ny avo lenta tamin'ny taona, na dia tao amin'ny ny faran'ny fiakaran'ny vidiny, fa ny vidin'ny varotra dia mbola mijanona eo amin'ny 15% amin'ny taona 2017, na izany aza, ny orinasa dia miankina amin'ny faran'ny taona 2017 sy 2018, amin'ny alàlan'ny fananganana q2 roa 1000 taonina, vola fampidiram-bola amin'ny tsipika famokarana vaovao, avo roa heny noho ny hatry ny ela sy ny fotoana mitovy, ny salan'isa famokarana salan'isa dia mihena 10% amin'ny taona 2017, amin'ny fomba mahomby amin'ny fihenan'ny vidin'ny vokatra, ary hanohanana ny fidiram-bola feno mandritra ny taona maharitra.
Ny vidin'ny fitaratra photovoltaic dia hiakatra amin'ny taona 2019: ny vidin'ny fitaratra photovoltaic dia nanomboka nipoitra indray tamin'ny 2018Q4 ary nitombo be alohan'ny faran'ny taona. Diabe tamin'ity taona ity dia nisondrotra 10% indray ny vidiny. Na dia nanantena aza izahay fa ny vidin'ny fotom-borona fotovoltaika dia hiakatra amin'ny taona 2019, mbola maika kokoa ny tahan'ny fitomboan'ny vidiny noho ny nanantena azy. Miorina amin'ny famatsiana makro sy fitakiana fitaratra fotovoltaika mandritra ny taona (famatsiana + 15% vs. Demand + 25 ~ 30%) ary ny toe-javatra famoronana micro micro, dia manantena izahay fa mbola misy ny vidin'ny fitaratra. Ny orinasam-pamokarana roa tonta an'ny orinasa napetraka amin'ny famokarana tamin'ny taon-dasa dia handray anjara amin'ny famoahana isan-taona amin'ny taona 2019, ary antenaina fa hisy famokarana 1000 taonina roa hafa hametraka amin'ny famokarana anhui sy Vietnam tsirairay ao amin'ny Q2 sy Q4 amin'ity taona ity. . Ny famokarana vera isan-taona ny varotra sy ny varotra dia andrasana hiakatra mihoatra ny 50%.
Ny halavan'ny famolavolana dia lava, ny modely amin'ny fifaninanana dia tsara, ary ny fahatsapana indroa avo roa heny. Ny fitomboan'ny fitaratra fotovoltaika dia hitohy amin'ny 2020: noho ny fanitarana ny famokarana ny fotom-pivarotana fotovoltaika mandritra ny herintaona sy tapany, ny fahafaha-miasa famokarana vaovao amin'ny taona 2020 dia mazava (mazava eo ny fiakaran'ny 20%). Miaraka amin'ny famokarana tsikelikely ny fahaizan'ny famokarana vaovao an'ny orinasam-pamokarana roa ao amin'ny indostria, dia hitohy ny fanentanana ny indostria ary hitarina bebe kokoa ny lohahevitry ny indostrian'ny duopoly. Mandritra izany fotoana izany, miaraka amin'ny vidiny 1) 2,5 / 2.0mm vera manasongadina tsikelikely; 2) fironana lamination fanafainganana haingana; 3) ny fahazoana an-tsokosoko amin'ny lafiny aoriana dia voamarina betsaka amin'ny alàlan'ny herinaratra tena izy; Ny fisondrotam-pandrefesana mavitrika famokarana herinaratra avo roa heny dia hitombo ny haingam-pandeha fitakiana fotomoltaika fitomboana noho ny fitomboan'ny fametrahana vaovao fotovoltaika. Miorina amin'ny vinavina fa ny 20% isan-taona ny tahan'ny fitomboan'ny sisan-javatra vaovao dia ny fangatahana fitaratra fotovoltaika no andrasana hahatratra 100% fitomboana ao anatin'ny telo taona. Noho izany, ny tontolon'ny fitaratra fotovoltaika dia antenaina hanohy ny fahombiazan'ny taona 2020 amin'ity taona ity.
Fanitsiana ny fahazoana sy soso-kevitra momba ny fampiasam-bola
Taorian'ny fanitsiana, ny tombotsoan'ny orinasa 2019 ~ 21E net no 6.7 (+ 3%), 9,8 (+ 17%), 1,2 miliara yuan. Ny taham-pivoarana valimbola mivoaka amin'ny net mandritra ny telo taona dia 43%, ary ny EPS mifanandrify dia 0.35, 0.50, 0.62 yuan.
Ny vidin'ny fihenam-bidy eo amin'ny orinasa ankehitriny dia mifanaraka amin'ny 49 / 33xpe amin'ny 209/20. Nampidininay ho an'ny «lanja mavesatra» ny isa manana anjara. Na izany aza, ny vidin'ny H mizara ihany no 10 / 7xpe tamin'ny 209/20, mitana ny fividianana “mividy” amin'ny fizarana H.
Yuanhai Road faharoa, Yuanhong Investment Zone, Chengtou Town, Fuqing, Fuzhou, China
© Copyright - 2010-2019: Zo rehetra voatokana. Torolàlana - vokatra manasongadina - Sitemap - AMP Mobile